Iziphumo eziPhambili kwiNtengiso yeNtengiso | Martech Zone
Iziphumo eziPhambili kwiNtengiso yeNtengiso
NgoLwesithathu, Julayi 9, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ingcebiso ngeSoftware Isebenzisana neAdobe ukuyila uPhononongo lokuqala lweNtetho yeMithombo yeendaba yezeNtlalontle. Iziphumo eziphambili zibandakanya:
Uninzi lwabathengisi (iipesenti ezingama-84) bahlala bethumela ubuncinci kwinethiwekhi ezintathu zosasazo, kunye neepesenti ezingama-70 bethumela ubuncinci kube kanye ngemini.
Abathengisi bahlala becaphula ukusetyenziswa komxholo obonakalayo, ii-hashtag kunye namagama abasebenzisi njengeendlela ezibalulekileyo zokwenza umxholo wemidiya yoluntu.
Ngaphezulu kwesiqingatha (iipesenti ezingama-57) zisebenzisa izixhobo zesoftware ukulawula ukuthumela, kwaye aba baphenduli bafumana ubunzima obuncinci bokuphucula umxholo wabo wentlalo.
Uphando lwethu lubonisa ukuba uninzi lwabathengisi bathumela rhoqo ubuncinci kumajelo amathathu okanye amane entlalontle kwaye bazama ukusebenzisa amaqhinga athile okwandisa ulwazi lwentengiso kwaye (ngokufanelekileyo) bavelise izikhokelo ezisemgangathweni. Uninzi lwabathengisi (iipesenti ezingama-70) bathi babhala umxholo kumajelo eendaba ezentlalo ubuncinci kube kanye ngemini, nge-19 yepesenti besithi bathumela ngaphezulu kwamaxesha amathathu imihla ngemihla. Kodwa umthombo wethu, ULiz Strauss, ikholelwa ekubeni uninzi lwazo lubhala ngaphandle kwenjongo ecacileyo kwaye ngaphandle kokuqonda okuyinyani kwento enokufezekiswa nakweliphi na ijelo elithile loluntu. UJay Ivey weNgcebiso ngeSoftware (apho unako thelekisa uphononongo lwesoftware yeCRM)
Kwaye idatha inokulixhasa elo bango. Umzekelo, uLiz uthi kubuyela umva ukuba abathengisi abaninzi babeka phambili umxholo obonakalayo kunokuba babeke phambili ukubonwa kunye nokujolisa kubaphulaphuli abathile. Njengoko ebeka, ukuba awazi ukuba umxholo wakho wakhelwe bani, awuzukuzithumela iintlobo ezifanelekileyo zemiqondiso. Kwaye oku kuphakamisa ukunqongophala kokuqonda malunga nemigaqo esisiseko yeqhinga elifunekayo ukufezekisa iziphumo zokwenyani, ezinokulinganiswa kusetyenziswa imidiya yoluntu. Nalu ulwahlulo lweziphumo:
Imithombo yeendaba kwiPost Media
Imidiya yokuCwangciswa kokuCwangciswa kwePosi
Iinjongo zoPhononongo loMxholo weMidiya yoLuntu
Imithombo yeendaba yeNtanethi yeNethiwekhi
Ubungakanani boMmangalelwa woMmangalelwa kumaLuntu
Imixholo yaBaphenduli beMithombo yeendaba kuLuntu
Amaqhinga okuPhononongwa kweMithombo yeendaba kwiNtlalo
Imithombo yeendaba yeNtlalo Ixesha lokuPosa
Ukusetyenziswa kwesiXhobo seMithombo yeendaba kuLuntu
Imithombo yeendaba yeNtlalontle yokuSebenzisa uNzima
Imithombo yeendaba yeNtlalontle yokuSebenzisa ubuNzima ngezixhobo
Funda ngaphezulu kwi iposti epheleleyo evela kuJay kwingcebiso yeB2B yeNtengiso yeMentor blog.
tags: zodakauJay iveylizUphando lwentengisoisifundo sentengisouphando lwezentengisoUmxholo wentlaloukulungiswa komxholo wentlalouphando lwentengiso yentlaloimithombo yeendaba kwimidiya yoluntuuphando kwimidiya yoluntuIingcebiso zesoftware
Indlela iShishini eliDityanisiweyo eliya kuyenza ngayo iMarike yoKhuseleko yeSazisi eyi- $ 47B
Ukuqonda nge-imeyile: UngaluPhando njani uKhuphiswano lwakho lwe-imeyile